National Power News:: एमालेबाट को बन्ला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ? National Power News:: एमालेबाट को बन्ला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ?
एमालेबाट को बन्ला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ?
२८ फागुन, काठमाडौं – नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेदवार सोमबार टुंगो लगाउँदै छ । सोमबार दिउँसो एक बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएकाले एमालेले उम्मेदवार छनोट गर्न लागेको हो । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो लगाउन सिंहदरवारमा बिहान शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइएको छ ।
अध्यक्ष पदका लागि पर्शुराम मेघी गुरुङ, गणेशप्रसाद तिमिल्सेना, सुमन प्याकुरेल, बलराम बास्कोटा, खिमलाल भट्टराई, शेरबहादुर कुँवरलगायत आकांक्षी छन् । माओवादीसँग भएको सहमतिअनुसार एमालेले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पाएको छ । सभामुख भने माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा बनिसकेका छन् ।